Ekoatora sy Kôlômbia No Manefa Be Indrindra Amin’ilay Olan’ny Sisintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2018 8:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, Ελληνικά, Español
Niteraka fahatohinana be teny anaty media, izay nampahafantatra tamin'ireo mpikirakira zavamahadomelina sy mpampihorohoro fa tsy hisy hiàla eo, ilay fakàna an-kery sy famonoana ireo Ekoatoriàna telo mpanao gazety notànan'ny Front Oliver Sinisterra, tarihan'ilay mpanohitra avy amin'ny FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) fantatra amin'ny anarana hoe “Guacho”. Ny Filoha Moreno, izay hita ho tohina tokoa, dia nanamafy tamin'ny 13 Aprily lasa teo, ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga rehefa misy fakàna an-kery : ny fahafatesan’ ny tsy manantsiny. “Ho an'i Paúl, tsy hisy hitsahatra eo. Ho an'i Javier, tsy hisy hitsahatra eo. Ho an'i Efraín, tsy hisy hitsahatra eo. Tsy hisy hitsahatra eo, tsy hisy hitsahatra eo, tsy hisy hitsahatra eo…” izany no re kiakiahan'ireo mpanao gazety avy amin'ireo media ao amin'ny firenena, latsa-dranomaso teny anatin'ireo famoriana sy fiaretantory.
Amin'ny alàlan'ilay fanentanana #NosFaltan3 (banga 3 izahay), takian'ireo Ekoatoriàna ny famotsorana ireo mpanao gazety mpiray tanindrazana aminy tazonin'ireo mpanohitra avy amin'ny FARC any amin'ny sisintany Kôlômbiàna. Sary nopihan'ny Notimundo.
Na mbola tsy naverina aza ny vatana mangatsiakan'ireo mpanao gazetin'ny El Comercio, nilaza ny minisitry ny atitany, César Navas, tamin'ny 17 Aprily fa nisy fanafihana iray nataon'ny Front Oliver Sinistierra. Nalaina an-kery tao amin'ny faritanin'i Esmeraldas i Oscar Villacís sy Katty Velasco. Araka ny nambaran'ilay minisitra, i “Guacho” izy tenany mihitsy no nandefa ho an'ny minisitra ny porofon'ny mbola fahaveloman-dry zareo. Tao anaty lahatsary iray naseho nandritra ny tafa natao ho an'ny gazety, nangatahan'ireo takalonaina ny Filoha Moreno mba hanao izay rehetra azony atao hanafahana azy ireo. “Mba tsy hanjo anay izay nahazo ireo mpanao gazety. Tsy misy idiranay ity ady ity”, hoy ny iray amin'ireo takalonaina.
Ny 26 aprily no fetra napetraky ny Filoha Moreno ho an'ireo manampahefana mba hisamborana an'i “Guacho”. Nambarany ampahibemaso fa raha sanatria tsy voahaja io fetra io, dia hangataka azy ireo izy “mba hisintaka”. Etsy ankilany, nanapaka hevitra izy ny tsy hampiantrano ao Ekoatora ny dinidinika fikatsahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Tafi-panafahana Nasiônaly (ELN, rantsana iray hafa mpanao ady anaty akàta kôlômbiàna) sy ny governemanta kôlômbiàna. “Nangatahako ny filohan'ny governemanta mba hampiato ireo firesahana fandriampahalemana sy ny anjara asantsika amin'ny fiantohana io dingana fikatsahana fandriampahalemana io, raha mbola tsy manome antoka ny ELN hampitsahatra ny asa fampihorohoroana ataony”, hoy ny filoha tamin'ny fampahalalambaovao kôlômbiàna iray.
Ny 22 aprily 2018, nomen'i Lenín Moreno ny baiko hanaovana fanadihadiana momba ny fampielezankevitra tamin'ny fifidianana ny filoha teo aloha Rafael Correa, voampanga ho handray vola tamin'ny FARC. Nanomboka tamin'ny Martsa 2008 ireo tatitra mahabe adihevitra avy amin'ireo mpiady anaty akàta fahiny sy Correa, fony natomboky ny tafi-panjakana kôlômbiàna ny Hetsika Phénix ary nandaroka baomba ny tobin'ny mpiady anaty akàta tao Angostura any Ekoatora. Nandritra io fanafihana io no niaraka maty taminà olona 23 hafa i Raúl Reyes, laharana faharoa tao amin'ireo mpanao ady anaty akata.
Raha toa ny famonoana ireo mpikambana telo tao amin'ilay tariky ny El Comercio ka nahafahana nandrefy tao Ekoatora ireo fiantraikan'ny fifanarahana fandriampahalemana ifanaovan'ny Kôlômbia sy ny FARC dia namboraka ihany koa ny halalin'ny filentehan'ny faritra an-tsisintany tsikelikely ho ao anatin'ny herisetra sy ny fivezivezen'ny zavamahadomelina. Irin'ireo governemanta roa izany izao ny haka ny razan'ireo mpanao gazety, hangataka ny famotsorana ireo mpivady nalaina an-kery sy ny hamongorana ny tsy fandriampahalemana ao amin'ilay faritra manasaraka ny firenena roa tonta.